အာဖရိကကိုဆန့်ကျင်သောအာရပ် - မူဆလင်နိုင်ငံများ၏ရာဇ ၀ တ်မှု - Afrikhepri Fondation
အာဖရိကအပေါ် မူတည်၍ အာရပ် - မူဆလင်နိုင်ငံများ၏ရာဇ ၀ တ်မှု
Nဆင်းရဲခြင်း၊ လူ ဦး ရေတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အမည်းရောင်တိုက်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လက်ရှိနှောင့်နှေးမှုများသည်လူအများမြင်သည့်အတိုင်းတြိဂံကုန်သွယ်မှု၏အကျိုးဆက်များတစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြောင်းလူအများထင်မြင်မိသည်။ ။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနှင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားမှုလုံးဝမရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ရောင်း ၀ ယ်မှုနှင့်အာရပ် - မူဆလင်များကပြုလုပ်သောစစ်ပွဲများသည်မှားယွင်းကြောင်းစွန့်စားမှုမရှိဘဲငြင်းခုံဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အာဖရိကလူမည်းနှင့်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်အရောင်းအ ၀ ယ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးထက်များစွာပိုမိုဆိုးရွားသည်။
နာကျင်မှုဝေဒနာကိုအာဖရိလူများအားအစ္စလာမ့်မြေများသို့ပြန်ပို့ခြင်းသည်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဤသည်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုများကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်“ အစဉ်အလာအရတိုင်းရင်းသားမျိုးသုဉ်းခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အစီအစဉ်ရှိသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးများစွာသောအားဖြင့်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ »ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ စာပေများစွာကအာဖရိကသုံ့ပန်းများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားသောအာရပ် - မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ဆိုးရွားလှသည့်ပြုမူဆက်ဆံမှုကိုသက်သေထူသည်၊ ဆူဒန် (Biles of the Blackan) နိုင်ငံသားများအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မထီမဲ့မြင်ပြုမှုနှင့်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ l, သမိုင်းပညာရှင်အိဗ်ခါလ်ဒမ်ကဤသို့ဖော်ပြသည် -“ ကျွန်စနစ်ကိုလက်ခံသောလူများသည်လူသားများနိမ့်ကျသောကြောင့်သူတို့၏နိူင်ငံရေးအဆင့်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်ကျွန်များကိုလက်ခံရန်သာဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်သားအများစုသည်အထူးသဖြင့် Almoravids များရောက်ရှိလာချိန် မှစ၍ အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤပြောင်းလဲခြင်းသည်၎င်းတို့ကို“ နိုင်ငံခြားသားများ” နှင့်“ မကြာသေးမီကဘာသာပြောင်းဝင်လာသူများ” အဖြစ်ရှိနေသော်လည်းသူတို့ကို“ သားကောင်” မှကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ဥပဒေဟာအဲဒီအချိန်ကလူမျိုးလို့ခေါ်သင့်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အာရပ်တွေဟာစာသားရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ဤသည်မှာမော်ရိုကို Ahmed al-Wancharisi က“ မယုံကြည်သူတစ် ဦး ကိုသာကျွန်ခံစေနိုင်သည်။ ” သို့သော်ကျွန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးအစ္စလာမ်သို့ကူးပြောင်းသည့်နေ့ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ပါက တစ် ဦး က၎င်း၏ရောင်းချမှုသို့မဟုတ်အပိုင်မေးခွန်းထုတ်လို့မရပါဘူး။ အစ္စလာမ်သာသနာသို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်လွတ်လပ်ခြင်းသို့ ဦး တည်သွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်လက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်မှမယုံကြည်မှုများကြောင့်ကျွန်စနစ်သည်အရှက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအငြင်းအခုံကိုကမ္ဘာသစ်ရှိ "ခရစ်တော်စစ်သားများ" ကအမိဝမ်းထဲမှာအလွန်အကံျွမွှေနှောက်နေသောအရေပြားရှိလူများနှင့်ပတ်သက်သည် (Ibn al Faqi ။ ) al-Wancharisi နှင့်အခြားသူများမှတင်ပြလိမ့်မည် နောက်တဖန်သခင်ကမိမိကျွန်အားလွတ်မြောက်စေလိုသည်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရပေ။ မြင့်မြတ်သောကျမ်းချက်များကိုအနက်ဖွင့်ခြင်းသည်အာဖရိကမွတ်စ်လင်မ်တို့၏ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်သူများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်ပေးသည်။
ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်ဒီအာရပ်ကမ္ဘာကကျေးကျွန်တွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေရတာလဲ။ အဘယ်အသုံးပြုမှုအတွက်? များစွာသောသူတို့သည်ကျွန်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်ပေးခံခဲ့ရသောကျွန်များဖြစ်ကြသည်။ ဤအရာများသည်အငယ်ဆုံးသောသူများကဲ့သို့ပထမ ဦး ဆုံးအလွယ်တကူစိတ်ကူး။ ရသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့်ကတ္တရာပြုခြင်းကိုခံရပ်ခဲ့ရသည် သို့သော်အများစုမှာအိမ်တွင်းမှုတာ ၀ န်များထမ်းဆောင်ခြင်း (သို့) အမှန်တကယ်စစ်တပ်တွင်ပါဝင်သည်။ "လုံးလုံး" အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများသည်အိမ်တွင်းနှင့်စစ်ပွဲများ၊ ဆားနှင့်ရွှေတွင်းများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးခြံများတွင်ပင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ "အမျိုးသမီးများ" သည်မိန်းမများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအနည်းဆုံးအလှဆုံးဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုကင်းမဲ့သူများသည်နွားမွေးမြူသူများနှင့် "အိမ်ဖော်များ" သို့ဝင်ရောက်ကာမည်သည့်လူမျိုးစုပင်ဖြစ်ပါစေ၎င်းကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။
အမှန်မှာ၊ ရှေး အချိန်မှစ၍ မိန်းမစိုးများသည်အာရပ်ကမ္ဘာတွင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေကြသည်။ စပိန်သို့အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားသောဆလဗ်ငယ်များ (ဥရောပသားများ) သည်ထိုဒေသတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံရပြီး၎င်းတို့အားသူတို့၏ခွန်အားကိုလျော့နည်းစေသည်။ စစ်မှန်သောယုံကြည်သူများကိုလူကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည့်ကိုရီးယားဥပဒေအရဂျူးလူမျိုးများသည်ဂျူးလူမျိုးများကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အနက်ရောင်တိုက်ကြီးမှယောက်ျားလေးများသည်အလားတူတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရသည်။ သူတို့၏ရှင်သန်နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းမှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သေစေလောက်သောလူနာများ၏ ၇၀ မှ ၈၀% ကိုသေစေခြင်းသည်စစ်မှန်သောမျိုးဖြုတ်သုတ်သင်မှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အာရပ်မွတ်စ်လင်မ်နိုင်ငံများမှလူမည်းမျိုးဆက်များရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ခြွင်းချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သခင်ဟောင်းဟောင်းများ၏ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနှင့်လက်တွေ့ကျသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တိုးမြှင့်လိုသောဆန္ဒကြောင့်၎င်းတို့တည်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
Bestialisation နှင့် Dismemberment
အရှေ့ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုစတင်ချိန်မှ စ၍ အာရပ် - မူဆလင်များသည်လူမည်းများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤကံဆိုးသောလူများသည်ကမ္ဘာ၏ဤဒေသရှိသားစဉ်မြေးဆက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုပေါင်းစည်းခြင်းမှတားဆီးရန်ကြောက်မက်ဖွယ်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထောင်နှင့်ချီသောညများရက်စက်စွာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောမှတ်ချက်များသည်အာဖရိကသုံ့ပန်းများအားကျွန်ဘဝလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၌ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောလူမည်းများအားအထူးသဖြင့်မထီမဲ့မြင်ပြုမူဆက်ဆံမှုကိုသက်သေထူသည်။ ၁၇ ရာစုမှအာဖရိကလူမျိုးများ၏အရှက်ကင်းမဲ့စွာခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်မှု - စီးပွားရေးနှင့်“ ကျန်းမာရေး” အကြောင်းရင်းများကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရခြင်း - ဥရောပသားများ၊ ဗင်းနစ်နှင့်ဘိုင်ဇန်တီယမ်အပြီးနောက်တွင်ပေါ်တူဂီနှင့်အင်္ဂလိပ်တို့က ဦး ဆောင်။ ပြင်သစ်နှင့်စပိန်တို့ကအနီးကပ်လိုက်ကြသည်။ အာရပ်မွတ်စ်လင်မ်သားကောင်များကိုကျွန်များလိုက်လံရှာဖွေခြင်းနှင့်အလွယ်တကူကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုများဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာအစားထိုးလိုက်ပြီ၊ ၎င်းသည်အတ္တလန္တိတ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေး၊
သို့သော်ဖာနန်ဘရာဒဲလ်ထောက်ပြသည့်အတိုင်းကျွန်ရောင်းဝယ်မှုသည်ဥရောပ၏မကောင်းသောတီထွင်မှုမဟုတ်ပါ။ အာရပ် - မွတ်စလင်မ်များမှာမူရင်းဒေသမှဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့်ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ အတ္တလန္တိတ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးသည် ၁၆၆၀ မှ ၁၇၉၀ အထိကြာပါကအာရပ် - မူဆလင်များသည် ၇ ရာမှ ၂၀ ရာစုအတွင်းလူမည်းများကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ ၇ ရာစုမှ ၁၆ ရာစုအထိနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာအောင်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုကိုကျင့်သုံးခဲ့သူများပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လူ ဦး ရေပြတ်တောက်မှု၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်အနက်ရောင်တိုက်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးခြင်းတို့သည်တြိဂံကုန်သွယ်မှု၏အကျိုးဆက်များ၏တစ်ခုတည်းသောအချက်မဟုတ်ပါ၊
လူမျိုးစုစစ်ပွဲများနှင့်သွေးထွက်သံယိုလက်စားချေမှုများသည်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်၊ လူမျိုးစုများနှင့်အာဖရိကလူမျိုးစုများအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နည်းတူအာရပ် - မွတ်စ်လင်မ်“ visitors ည့်သည်များ” ရောက်ရှိသည့်အချိန်အထိဤအရာအားလုံးသည်အတော်အတန်ကျိုးနွံမှုရှိခဲ့သည်။ သမိုင်းပညာရှင်အများစုမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။ အစ္စလာမ်မတိုင်မီကာလများအတွင်းအရှေ့ကျွန်များရောင်းဝယ်မှုသည်ဆလာဗ်လူမျိုးများကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ လွယ်ကူမှုအပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်၊ အနက်ရောင်တိုက်ကြီးရှိလူများကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အာရပ်မွတ်စ်လင်မ်များကနုံအုံ။ ၊ ထိရောက်သောကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းမရှိသောလူများ။ အတ္တလန္တိတ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးကာလအတွင်းအနောက်နိုင်ငံများတွင်အဓိကဖျက်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများရှိခဲ့လျှင်၊ အာရပ် - မွတ်စ်လင်မ်ကမ္ဘာတွင်တူညီသောအစပျိုးမှုခြေရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာမတွေ့ပါ။ ကျွန်ပ်တို့၏သရုပ်ဆောင်များသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာပညာရှင်များနှင့်မတူဘဲအစီရင်ခံစာများရေးသားခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရမည့်အရှေ့ကျွန်ရောင်းဝယ်မှု၏ကိန်းဂဏန်းများမှာအလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်သမိုင်းပညာရှင် Reginald Coupland က“ ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်တင်သွင်းသောအာဖရိကသားအရေအတွက်သည်ထူးခြားစွာဖြစ်ရမည်” ဟုအခိုင်အမာဆိုကြသည်။ ဂျီဟတ် (မယုံကြည်သူများအပေါ်သန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲ) ကူညီခြင်းဖြင့်အာရပ်၊ တူရကီ၊ ပါးရှားနှင့်မက်ဂျရဘ်သမားများသည်အနက်ရောင်တိုက်ကြီးကို“ အဖြူ” အဖြစ်သွန်းလောင်းခဲ့ပြီးရာစုနှစ် ၁၃ ခုကျော်ကြာသည်။ Ibn Khaldoum ကအာရပ်ချဲ့ထွင်မှုကို“ သစ်တောများကိုမနှမြောဘဲစောင့်ကြပ်နေသည့်စစ်သားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ဒီအာရပ်ပညာရှင်ကသူ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Attila လိုပဲလူမည်းတွေဆီကနေမြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းအထိသူတို့ဖြတ်သန်းသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့လူဆိတ်ညံရာအရပ်ကိုကြဲခဲ့တယ် အာရပ်လူမျိုးများရောက်ရှိလာချိန်တွင်အာဖရိက၌စစ်ပွဲများစုဆောင်းခြင်းနည်းစနစ်များကိုအဆင့်ဆင့်လေ့လာပြီးကောင်းစွာရေနံထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
certainကရာဇ်အချို့နှင့်လူတို့၏မုဆိုးများအကြားအရောင်းအ ၀ ယ်ကြီးပွားလိမ့်မည်။ ပွဲစားများနှင့်အလယ်အလတ်တစ်စုလုံးသည်လောဘကြီးသော ၀ တ်စုံငယ်များကိုယ်စားသူတို့အတွက်ဈေးကောင်းရသည့်အကျဉ်းသားများကိုအာရပ်တို့ထံအရှက်မရှိရောင်းစားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်လက်စားချေလိုသောဆန္ဒသည်စိတ်ဓာတ်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောအခါသူနှင့်သူ၏အပေါင်းအဖော်များအတွက်“ ကုန်စည်ကောင်း” ဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဤ "အမဲလိုက်နည်းစနစ်" တစ်ခုမှာဤအချက်များပါဝင်သည်။ ညသန်းခေါင်ယံတွင်ရွာတစ်ရွာကိုဝိုင်းရံထားပြီးနောက်ကင်းစောင့်များဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး သည်အော်ဟစ်သံများဖြင့်သူ၏ကြံရာပါများကမီးရှို့လိုက်သည်။ အိပ်ချိန်မှာဖမ်းမိတဲ့ရွာသားတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး၊ ကြွင်းသောအရာတို့သည်အနာဂတ်နှင့်ရှည်လျားသောခရီးတက်သည်ချည်ထားခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သူများကိုလူများကိုလိုက်ရှာရန်လေ့ကျင့်ပေးသည့်တောင်များကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
လူကုန်ကူးသူများသည်စာဗားနားတွင်ခိုလှုံနေကြပြီးလူကုန်ကူးသူများသည်သူတို့ကိုနှင်ထုတ်ရန်မီးတင်ရှို့ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအတွက်ကြာရှည်စွာကုန်းတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်မြောက်အာဖရိကသို့သည်ကရုဏာမဲ့သဲကန္တာရမှတဆင့်စတင်ခဲ့သည်။ "နွား" များ၏ ၂၀% ခန့်ခန့်အရှုံးသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။ ဤသဲသမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်၍ သယ်ဆောင်သွားသောယာဉ်တန်းများ၏တိုးတက်မှုသည်တစ်ခါတစ်ရံလပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအခြေအနေကိုမြင်ယောင်ကြည့်ကြစို့၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသောယောက်ျားလေးများသည်သစ်သားခက်ရင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ကာသံမဏိဖြင့် (ရေရှည်တွင်ဇာတိပကတိအားဖြင့်ဆန့်ထုတ်ထားသော) သူတို့၏ခရီးနှင့်ခက်ခဲသောခရီးစဉ်တွင်။ ည၏အအေး၊ နေ့၏အပူ၊ ဆာလောင်မှု၊ စော်ကားမှုနှင့်နှင်တံ၊ ရောဂါများ ...
စူးစမ်းရှာဖွေသူ Natchigal ကကျွန်တော်တို့ကို Baroque ပုံစံဖြင့်ဖိတ်ခေါ်သည့်သက်သေထွက်ဆိုသည်။
အနက်ရောင်နိုင်ငံများ၏ဆင်းရဲသောကလေးများရှည်လျားသော, မျှော်လင့်စရာနှင့်နာကျင်ခရီး၏နောက်ဆုံးခြေထောက်မှာဒီနေရာမှာသေခြင်းတရားတွေ့ဆုံရန်ပုံရသည်။ ခရီးရှည်သည်အစားအစာမလုံလောက်ခြင်းနှင့်ရေရှားပါးခြင်း၊ တစ်ဖက်တွင်ကြွယ်ဝသောသဘာဝသယံဇာတများနှင့်သူတို့၏ဇာတိမြေ၏စိုစွတ်သောလေထုတို့အကြားခြားနားမှုနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်သဲကန္တာရ၏ခြောက်သွေ့ပြီးသွေးအားနည်းရောဂါ၊ သူတို့၏သခင်များကပြဌာန်းထားသည့်အခက်အခဲများနှင့်သူတို့တွေ့ကြုံရသောအခြေအနေများကြောင့်သူတို့၏အားနည်းချက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးစေသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်ပျောက်ကွယ်သွားသောဇာတိမြေကိုအမှတ်ရခြင်း၊ မသိသောအနာဂတ်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ထိုးနှက်ခံရသည့်ကာလအတွင်းဖြတ်သန်းသွားရမည့်ခရီး၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း၊ အကယ်၍ နွမ်းပါးသောသတ္တ ၀ ါများသည်ထ။ ပြန်လမ်းလျှောက်ရန်ခွန်အားမရှိကြပါက၎င်းတို့အားစွန့်ပစ်လိုက်ရုံသာမကနေ၏ရောင်ခြည်များ၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနှင့်ရေငတ်မှုတို့၏ဆိုးကျိုးများမှတဖြည်းဖြည်းသေဆုံးသွားသည်။
တိုက်ကြီး၏ပထမ ဦး ဆုံး depopulation
အာရပ်ကျွန်ကုန်သည်များဖြတ်သန်းပြီးသည့်နောက်စတန်လီကအာဖရိကဒေသအချို့၌လူ ဦး ရေ၏ ၁% မျှသာရှိသည်ဟုဆိုလိမ့်မည်။ "လူမည်းသွေးသည်မြောက်ဘက်သို့စီးဆင်းသွားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင်ဤကုန်ပစ္စည်းကိုစျေးကွက်ရှိအပျော်တမ်းသမားများအတွက်“ ကုန်ပစ္စည်း” ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဒီကျွန်ရောင်းအားကိုမျက်မြင်တွေ့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥရောပသက်သေတစ် ဦး ပြောတာကိုကြည့်ရအောင်။
Cancalli (ကိုင်ရိုခရိုင်) အနီးရှိလမ်းများနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုရှိသည်။ ဆင်းရဲသောကျွန်များကိုရောင်းသည့်နေရာ၊ တစ်ခေါက်တည်းတွင် ၄၀၀ ကျော်ကိုငါတွေ့ခဲ့ရပြီးအများစုမှာအနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ Pretre-Jan နယ်နိမိတ်?
သူတို့သည်သူတို့ရဲ့အကွာအဝေးကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးသူတို့ရဲ့လက်တွေကသူတို့နောက်မှာချည်ထားတယ်။ ဒါမှငါတို့တို့ပိုကောင်းအောင်စဉ်းစားနိုင်ပြီးချို့ယွင်းချက်များရှိလားဆိုတာစမ်းကြည့်ပြီးစျေးသို့မပို့ခင်စျေးကွက်ထဲသို့ပို့သည်။ သူတို့ရဲ့အဝတ်အစားဆံပင်ကိုရေချိုး၊ ဖြီးပြီးကြိုးကောင်းကောင်းရောင်းဖို့၊ လက်များနှင့်ခြေထောက်များအတွက်လက်ကောက်များ၊ လက်စွပ်များ၊ နားရွက်များ၊ လက်ချောင်းများနှင့်ကျစ်၏အဆုံးပိုင်းများ၌ချိတ်ဆွဲထားသည်။ နှင့်ဤလမ်းအတွက်စျေးကွက်မှ ဦး ဆောင်လျက်, မြင်းများကဲ့သို့ hackneyed ။ မိန်းကလေးများသည်ယောက်ျားလေးများနှင့်မတူဘဲသူတို့၏ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးအုပ်ရန်အထည်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ လူတိုင်းရှေ့တွင်၎င်း၊ နောက်ကွယ်၌သူတို့ကိုလည်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ စကားပြောခြင်းနှင့်သီဆိုခြင်း၊ သူတို့ရဲ့အသက်ရှုမှုကအနွေးဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်ခံစားကြည့်ပါ။ လမ်းလျှောက်ဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်သူမကသူမကိုအနည်းငယ်ဆွဲထုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ သူမအပျိုစင်ဖြစ်လျှင် cognoistre များအတွက်ကျူးလွန်ဒီ matrons အားဖြင့်ဝယ်၏ရှေ့တော်၌ကျယ်ပြန့်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒါကအမှုဖြစ်ခြင်း, ကပိုကျိုးနပ်သည်။
အာရပ် - မွတ်စလင်နိုင်ငံများသို့ရောက်သောအခါအာဖရိကသုံ့ပန်းများပုန်ကန်မည်ဖြစ်သည်။ မက်ဆိုပိုတေးမီးယားတွင်အနက်ရောင်သုံ့ပန်းအမြောက်အများကိုပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။ Zends လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမျိုးသားတွေကအများအားဖြင့်အရှေ့အာဖရိကကပါ။ သူတို့ကိုဘဂ္ဂဒက်နဲ့ဘာရာစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာဆောက်လုပ်ဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ ဤသည်မှာထောင်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကျော်ကြာအောင်သာယာဝပြောခဲ့သည့်ကျယ်ပြန့်သောယာဉ်အသွားအလာတစ်ခုအတွင်းဖြစ်သည် အာရပ်များကလူသားများအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည့် Zends များသည်တစ်ချိန်ကကျွန်ဘဝသို့လျှော့ချခြင်းခံရသည့်ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့ပြီးသူတို့၏ကံကြမ္မာကိုအလျင်အမြန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ဆာဟာရနှင့်အရှေ့ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုမြင့်တက်လာခြင်းသည်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့်လည်းကွာခြားသည်။ အချိန်ကာလကတည်းကလူသည်ကျွန်ဖြစ်လိုသူများ၏လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုငြင်းပယ်ရန်ရိုးရှင်း။ အခြေခံအားဖြင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Zendj ဟူသောစကားလုံးကိုအာရပ်လူမျိုးများကအသုံးမ ၀ င်ဘဲမထီမဲ့မြင်ပြုသောအရိပ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ “ Hungry” ဟု Zendj ပျံသန်းသည်၊ အပြည့်အဝ, အ Zendj ချိုးဖောက်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာလူမည်းတွေကိုအလုပ်အများဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ သူတို့၏အလုပ်ခွင်၌စိတ်ဆင်းရဲစရာအခြေအနေများတွင်ရပ်ထားကာလက်တစ်ဆုပ်စာအနည်းငယ်နှင့်အစားအစာအားလုံးအတွက်ရက်စွဲများကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ အကျင့်ဆိုးများကိုကိုယ်စားပြုသောမြို့တော်ဘဂ္ဂဒက်ကိုဖျက်ဆီးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အာဖရိကသားများသည်သူတို့၏အမုန်းတရားများကိုပေါက်ကွဲစေလိမ့်မည်။ ရိုးရိုးကလပ်များသို့မဟုတ်သံကွင်းများဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးအုပ်စုငယ်လေးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းကာသူတို့သည် ၆၈၉ ခုနှစ်တွင်ထခဲ့သည်။ ဤပထမဆုံးပုန်ကန်မှုသည် Mus`ab ibn Al-Zubayr ၏ဆက်ခံ Khalid ibn `Abdallah အစိုးရလက်ထက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်သူပုန်များသည်နောက်ပိုင်းတွင်လက်နက်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့မရောက်ရှိနိုင်သောနေရာများတွင်တည်ထောင်ထားသောစခန်းများတွင်သူတို့ကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့စေခဲ့သည်။ ထိုကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမှသူတို့စီးနင်းမှုစတင်ခဲ့သည်။ ကင်းထိုးခြင်းနှင့်တိုက်ပွဲများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကသူတို့ရဲ့အားသာချက်မှလှည့်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့သည်အောက်ပိုင်းအီရတ်၏အဓိကမြို့များဖြစ်သောအယ်လ် -Ubulla၊ Abbâdân၊ Basra၊ Wsit, Djubba, Ahwázစသည့်အဓိကမြို့များကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ Abbasid စစ်တပ်များသည် Zends များသိမ်းယူသိမ်းယူခဲ့သောထိုမြို့များအားလုံးကိုအခက်အခဲမရှိပြန်လည်နေရာချထားနိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Zends သည်ရှုံးနိမ့်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဒုတိယ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစနစ်တကျပုန်ကန်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်သူတို့ကိုတားဆီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသောင်းကျန်းမှုသည်ငါးနှစ်အကြာ ၆၉၄ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သူမသည်ပထမ ဦး ဆုံးထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင် Zend အဖွဲ့များသည်အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏စစ်တပ်မှအခြားလူမည်းသဲကန္တာရများ၊ အိန္ဒိယရှိဆင်ဒမှကျေးကျွန်များနှင့်အာဖရိကတိုက်၏အတွင်းပိုင်းမှအခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သောင်းကျန်းသူများသည်အစပိုင်းတွင်ဘဂ္ဂဒက်မှအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏စစ်တပ်ကိုအပြင်းအထန်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ အာရပ်စစ်တပ်များသည်သူတို့ကိုချေမှုန်းရန်နှစ်ကြိမ်သွားရန်တာဝန်ရှိသည်။ Zends ၏တတိယပုန်ကန်မှုမှာ၎င်းသည်လူသိအများဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့သောသတင်းရပ်ကွက်များအရအီရတ်နှင့်ဟာဇစ်စတန်ကိုအကြီးအကျယ်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီးကြီးမားသောပစ္စည်းပျက်စီးမှုများနှင့်ရာပေါင်းများစွာသောသေဆုံးမှုများသို့မဟုတ်နှစ်သန်းကျော်အထိဖြစ်စေခဲ့သည်။
၈၆၉ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင်သြစတေးလျခေါင်းဆောင်အလီဘင်မိုဟာမက်၏အမိန့်အရဆဘိုက်အယ်လ်ဇန်ဒစ်အမည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူသည်မထင်ရှားသောဇာစ်မြစ်ဖြစ်သော်လည်းသူ့ခေတ်ရှိအာဏာရအတန်းများကိုချဉ်းကပ်နိုင်ခဲ့သည်မှာထင်ရှားသည်။ သူသည်ပါရမီရှိသော၊ ပညာတတ်ကဗျာဆရာလည်းဖြစ်၊ မှော်အတတ်နှင့်သိပ္ပံကိုတတ်မြောက်။ ကလေးများအားလူမှုရေးတွင်ပါ ၀ င်စေခဲ့သည်။ သဒ်ဒါနှင့်နက္ခတ္တဗေဒစသည့်ဘာသာရပ်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိအောင်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အလီဘင်မိုဟာမက်သည်မူဆလင်ကမ္ဘာ၏သမိုင်းတွင်အကြီးကျယ်ဆုံးသောပုန်ကန်မှုဖြစ်သည့် Zends ၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့်မအောင်မြင်မီနိုင်ငံ၏အခြားဒေသများတွင်အုံကြွမှုများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ထိုကာလသည်သောင်းကျန်းသူများအတွက်ချဲ့ထွင်ရန်နှင့်အောင်မြင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗဟိုအာဏာသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သူတို့ကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်နေရာမရှိချေ။ Caliph al-Mutawaki ကိုသတ်မှုအပြီးတွင်မြို့တော်ဘဂ္ဂဒက်ကိုရေတွက်။ မရသည့်မင်းမဲ့စရိုက်လက်သို့အပ်နှံခဲ့သည်။ Praetorian Guard ၏တူရကီအရာရှိများကသူသည် ၈၇၀ မှ ၈၇၄ အတွင်းတွင်အစစ်အမှန်အင်အားမရှိဘဲအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ကရုဏာတော်ကိုလုံးဝခံယူခဲ့သည်။ ပြည်နယ်တော်တော်များများ၌ဆင်းရဲသောသူနှင့်မကြာခဏဆာလောင်မွတ်သိပ်သောလူ ဦး ရေသည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏အခွင့်အာဏာကိုတစ်ခါတစ်ရံစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ Kurdistan ၏ကုန်းမြင့်ဒေသများ၊ အီရန်တောင်ဘက်နှင့်အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့ရှိ Sind ဒေသများတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အမှီအခိုကင်းမှုကိုကြေငြာပြီးယာကတ်မင်းဆက်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ al-Saffas (၈၆၃-၉၀၂ ။ )
ထို့အပြင်အီရတ်အောက်ပိုင်းရှိကမ်းခြေရှိ Khzzistan ဟုခေါ်သည့်နယ်မြေသည်ပိတ်ဆီး။ မရနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တူးမြောင်းများစွာကတပ်များသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့်ကြီးမားသောသင်္ဘောကြီးများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားဆီးခဲ့သည်။ ဒီဒေသကသူပုန်တွေကိုခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ရန်သူရဲ့ရှေ့မှာရှေ့မှာအလွယ်တကူနှိမ့်ချနိုင်ပုံရတယ်။ အလီဘင်မိုဟာမက်သည်ဇင်ဂျ်မဟုတ်ဘဲအာဖရိကသားတို့၏ရှေ့ပြေးမဟာမိတ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူကအရောင်မခွဲခြားဘဲယောက်ျားအားလုံးရဲ့တန်းတူညီမျှမှုကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အာရပ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဤကျွန်ဖြူဟောင်းသည်ဇာစ်မြစ်အားလုံး၏ကျွန်များနှင့်ကြာရှည်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏အမိန့်တော်အောက်၌ Zends သည်အာရပ်မှတ်ဉာဏ်အားသိမ်းဆည်းထားသော Zends ၏ကြောက်မက်ဖွယ်စစ်ပွဲအတွင်းပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်မြို့ကြီးများစွာကိုသိမ်းယူပြီးပြည်သူများကိုသတ်ဖြတ်ပြီးသောင်းကျန်းသူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်စေလွှတ်သောစစ်တပ်များကိုမောင်းထုတ်လိမ့်မည်။
ဘဂ္ဂဒက်မှအထွေထွေအဘူအမ်မန်ဆာ၏လက်အောက်တွင်ခိုင်မာသောစစ်တပ်ကိုအာဖရိကသားများကဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တူရကီဗိုလ်ချုပ်အဘူဟီလာကအမိန့်ပေးသောစစ်သည်လေးသောင်းကိုလည်းရိုက်နှက်ပြီးမောင်းထုတ်လိမ့်မည်။ Zends မှခေါ်ဆောင်လာသည့်အကျဉ်းသားအမြောက်အများကိုအသေသတ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏စစ်သားတစ်ထောင်သည်အသတ်ခံရလိမ့်မည်။ Basra သို့ရွက်လွှင့်နေသောသမုဒ္ဒရာသို့သွားသောသင်္ဘော ၂၄ စီးကိုသောင်းကျန်းသူများကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ဒီပုန်ကန်မှုကလူကြိုက်များမှုဖြစ်လာတယ်။ Zends သည်လွတ်လပ်သောတောင်သူလယ်သမားများ၏စာနာမှုကိုအနိုင်ယူပြီးဘုရားဖူးများသို့ပင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားရုံးများနှင့်သန္ဓေသားအခြေအနေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဒီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့အသစ်မှာကျွန်ခံပြီးလူကုန်ကူးခံရတဲ့အာရပ်နဲ့တူရကီစစ်သားတွေကိုလက်တုံ့ပြန်မှုဥပဒေကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်။
Zends သည်အံ့အားသင့်စွာဖြင့်တိုက်ခိုက်ပြီး Basra ကိုစက်တင်ဘာ ၇ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ ၈၇၁ တွင်ဆုတောင်းချိန်၌နှိမ့်ချလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သူတို့သည်သူတို့၏မြို့တော်ကိုအနီးအနားရှိအယ်လ် Muhtara မြို့တွင်စစ်တပ်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၏နေရာတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ခိုင်မြဲစွာတပ်ဆင်ထားပြီး၊ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ငွေများ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်ကိုထူထောင်နိုင်ခြင်း၊ အခြားသောခေတ်ပြိုင်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည့်Hamdân Karmat နှင့်Ya`kûb ibn al-Layth တို့မှ Saffarid များနှင့်သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ်တွင်သူတို့၏ပြည်နယ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Zends သည်ဒေသခံအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များစေလွှတ်သောတပ်ပေါင်းစုဖြင့် ၈၈၃ ခုနှစ်တွင်မနှိမ်နင်းမီ ၁၄ နှစ်နီးပါးကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာထိုအချိန်အတောအတွင်းသူတို့သည်ဘဂ္ဂဒက်အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဓိကပြconcernနာဖြစ်လာခဲ့လို့ပဲ။ ဤနည်းလမ်းသည် Zends များကိုတူးမြောင်း၏ဒေသအတွင်းတွင်ပိတ်ဆို့ရန်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
ထို့နောက်၎င်းတို့သည်အယ်လ်မူမူဖရက်နှင့်သူ၏သားအဘူအဗ်ဘားစ် (အနာဂတ်အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အစ္စလာမ်သဒ်ဒ်ဒင်) ဦး ဆောင်သောရှည်လျားသောဝိုင်းရံခြင်းကိုခံကြရလိမ့်မည် အာဖရိကန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ကျသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလီဘင်မိုဟာမက်သည်မိမိ၏ပရောဖက်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သော Mahdi ကိုကြေငြာခဲ့ခြင်းကြောင့်အလွန်အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော၊ သူသည်သူတို့၏စွန့်စားမှုအစတွင်သူဖော်ပြခဲ့သောမူများကိုချိုးဖောက်ကာအလီဘင်မိုဟာမက်သည်လူမည်းများကိုလူမည်းများအားလူမှုလှေကားအောက်ခြေသို့ပို့လိုက်သည်။ တကယ်တော့ ၂၀ ရာစုအတွင်းကျွန်စနစ်ကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းသည်အထိ၊ အစ္စလာမ်၏အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများမှလွတ်မြောက်လာသည့်တိုင်အောင်လူမည်းတစ်ယောက်ဟာဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ထက်မမြင့်တက်ခဲ့ပါဘူး။
အချို့သောသားများသို့မဟုတ်အနက်ရောင်မယားငယ်များ၏မြေးများသည်အာရပ်တပ်များနှင့်အီဂျစ်ကိုအောင်နိုင်သူ Omar နှင့် Amr Ibn al As ကဲ့သို့သောပထမဆုံးအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတောင်မှခွဲခြားသိမြင်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးတော့ကျော်ကြားတဲ့ Nubian မိန်းမစိုး Ab''l-Musk Kafur ဟာဆယ်ရာစုနှစ်မှာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ Regent ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သို့သော်သူ၏တိုင်းသူပြည်သားများအားသူလှုံ့ဆော်ခဲ့သည့်မထီမဲ့မြင်ပြုမှုကိုဖော်ပြရန်အာရပ်ကဗျာဆရာ Al Mutanabbi သည်ဤထိုးစစ်များကိုသူ့အားပေးခဲ့သည်။
ကျွန်သည် လွတ်လပ်၍ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောလူသား၏အစ်ကိုမဟုတ်ပါ
တုတ်မ ၀ ယ်ဘဲကျွန်ကိုမဝယ်ပါနှင့်
နှင့်သူ၏ကုလားအုပ်အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူ negro အဘယ်အရာကိုနှုတ်ခမ်းကိုတွေ့မြင်
အဘယ်သူသည်အစဉ်အဆက်ကဒီ negro အမတ်ဖို့ nobility သှနျသငျ?
သူ၏“ အဖြူ” ဆွေမျိုးများသို့မဟုတ်တော်ဝင်ဘိုးဘေးများလော။
nobility ၏နိုငျ Are, ထို့နောက်အဘယျသို့
အီရတ်တွင်လည်းသောင်းကျန်းမှုအစတွင်ပြသခဲ့သည့်သူ၏သာတူညီမျှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသော်လည်းလူမည်းများအားတူညီသောမထီမဲ့မြင်ပြုမှုကြောင့်ကာလီနီဘင်မိုဟာမက်ကသူ၏လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ဘွဲ့များကိုသူ၏တစ် ဦး တည်းသောအဖော်များအတွက်သာသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ အဖြူ Zends သည်သူတို့ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်နေသည်ကိုမသိသောကြောင့်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ဆန့်ကျင်နေစဉ်တွင်ဆန့်ကျင်သောစစ်တပ်များကသဲကန္တာရကိုလက်နက်ကိုင်များဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးဝိုင်းထားခြင်းခံရသူများကိုလက်ဆောင်များဖြင့်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်တိုက်ပွဲဝင်သူများ၏စိတ်ဓာတ်ကိုပိုမိုအားနည်းစေရန်သူတို့၏ကာကွယ်ရေး၊ သူတို့၏အသေကောင်များ၏ခေါင်းများနှင့်ပြည့်နေသောလှေများကို ဦး တည်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်မှုများစွာပြုလုပ်ပြီးနောက် Zends ၏ခေါင်းဆောင်အလီဘင်မိုဟာမက်သည်အသတ်ခံရသည်။
၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အရာရှိများအားလည်းသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ထောင်ချခြင်းနှင့်နှစ်နှစ်အကြာတွင်ဘဂ္ဂဒက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ အာဖရိကတိုက်ရှိခုခံတိုက်ခိုက်သူအများစုသည်လက်နက်ချမည့်အစားလက်နက်များကိုင်ဆောင်ထားသောသေခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ အသက်ရှင်လျက်ဖမ်းမိသောလူအများအပြားကိုတစ် ဦး ချင်းစီသတ်ဖြတ်ပြီးအခြားသူများကမူမသမာသောညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ သို့သော်အယ်လ်မူဖ်ဝါ့ခ်၏ညီဖြစ်သူသည်ဇင်ဒါများကိုကြာမြင့်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့သူများထဲမှများစွာသောသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စစ်တပ်ထဲကို ၀ င်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ တကယ်တော့အချို့စာရေးဆရာများ၏သီအိုရီများနှင့်ဆန့်ကျင်။ Zends စစ်ပွဲသည်လူသိနည်းသော၊ ရက်စက်မှုမရှိသောထင်ရှားသည့်တိုက်ပွဲများမဟုတ်ပါ။ နှစ်ပေါင်း (၁၄) နှစ်တာကာလအတွင်း (၈၆၉) မှ (၈၈၃) အကြားကျွန်စနစ်ကိုကျွန်ပြုမှုများပြားလာခြင်းမှာအာရပ်သမိုင်းပညာရှင်များ၏အဆိုအရအစ္စလာမ်သာသနာတွင် ၅၀၀,၀၀၀ နှင့် ၂ သန်းအကြားရှိခဲ့သည်။
ဤလူသတ်မှုပconflictိပက္ခ၏ရလဒ်မှာလူမည်းကျေးကျွန်များ၏အာဇာနည်သတ်ဖြတ်မှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်နေရာများပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်အတူ၊ ထို့နောက်တွင်ဤဒေသတွင်ကြံကြံစိုက်ပျိုးမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ အမှန်မှာ၊ ဤတိုင်းပြည်ရှိအာဖရိကသားများကိုကျွန်စနစ်ဖြင့်ကျွန်ပြုခြင်းသည်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Zends တို့၏ပုန်ကန်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်အာရပ်ကမ္ဘာမှလူမည်းအလုပ်သမားများအားအမြတ်ထုတ်ခြင်းကြောင့်သေခြင်းတရားကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြေငြာလိမ့်မည်။ ထိုပုန်ကန်မှုများသည်အာရပ်မှတ်ဉာဏ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ အဓိကဖြစ်ရပ်များသည်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားအင်ပါယာ၏အုတ်မြစ်များကိုအပြင်းအထန်လှုပ်ခါစေခဲ့ပြီးကျူးကျော်သူများကသယ်ဆောင်ပေးမည့်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီကြာမြင့်စွာက၎င်း၏ကျဆင်းမှု၏အစကိုမှတ်သားခဲ့သည်။ XNUMX ရာစုအတွင်းမွန်ဂို။
ဒီကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရပ် - မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေရဲ့သမိုင်းမှာအရှည်ဆုံးပဲ။ မှတ်မိသင့်တယ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့မော်ရီတေးနီးယားနိုင်ငံကကျွန်စနစ်ကိုသာတရားဝင်ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးတိုင်းပြည်အဖြစ်နှင့် ၁၉၈၀ တွင်ဒုတိယအကြိမ်၊ တူနီးရှားနှင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယား (၁၈၄၆) နှင့်ဥရောပနိုင်ငံများအကြာတွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုနှင့်အာရပ် - မွတ်စလင်စစ်ပွဲများသည်အာဖရိကလူမည်းများအတွက်ဖြစ်ပြီးရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်အတ္တလန္တိတ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးထက်များစွာပိုမိုဆိုးရွားခဲ့သည်။ ဆာဟာရသဲကန္တာရနှင့်အရှေ့ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုများတွင်အာရပ်များသည်လူမည်းအမျိုးသမီးများအများစုကိုမိန်းမများအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ရသည့်အတိုင်း၊ မျိုးပွားရန်သူတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအတွက်အချို့သောအသက်အရွယ်သို့ရောက်ရှိသွားသူအားလုံးသည်အသုံးမကျသောပါးစပ်အဖြစ်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၊ လူ ဦး ရေအမြောက်အများတင်သွင်းနေသော်လည်းအာဖရိကမှနှင်ထုတ်ခံရသောလူနည်းစုသာမွတ်စ်လင်မ်ကမ္ဘာတွင်ကျူးလွန်ခံရနိုင်သည်။ ဒီအချက်ကအာဖရိကကျေးကျွန်တွေရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အားလုံးနီးပါးပျောက်ကွယ်သွားရသည့်အကြောင်းအရင်းကိုမရှင်းပြဘဲရှင်းပြထားပါတယ်။ ယနေ့သူတို့သည်အရှေ့၌မရှိသလောက်နီးပါးဖြစ်သည်။ ယေဘူယျကျက်စားခြင်းအလေ့အကျင့်သည်အဓိကအချက်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအများစု၏လူနေမှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အင်္ဂလိပ်ခရီးသွားတစ် ဦး က“ သူတို့သည်အလွန်ကြိုးစားနေကြပြီးငါးနှစ်မှခြောက်နှစ်အတွင်းကျေးကျွန်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဖိနှိပ်ရန်လုံလောက်ခဲ့သည်။ နောက်တဖန်ဆီဖြည့်ရန်လိုအပ်သည် »ဤလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုသည်အလွန်များပြားလှသောလူအများစုက၎င်းသည်ဘာသာရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှုဟူသောအမည်ဖြင့်မေ့ပျောက်ခြင်းကုလားကာနှင့်ထာဝရဖုံးအုပ်ခြင်းကိုမြင်လိုကြသည်။
ထို့ကြောင့်အာဖရိကနှင့်အခြားသမိုင်းပညာရှင်အများစုသည်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာသုတေသနကိုအနောက်နိုင်ငံများမှကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတိုင်းအတာအထိကန့်သတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျင့်ဝတ်မရှိသောအရာမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ခံစားလွယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သနည်း။ ဆန္ဒအနေဖြင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအားဆဟာရနှင့်အရှေ့ကျွန်ရောင်း ၀ ယ်မှု၏အတိုင်းအတာနှင့်အတိုင်းအတာတို့ကိုအသိပေးရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့အာရပ် - မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေဟာသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့တာ ၀ န်အပြည့်အ ၀ ကိုယူပြီးတစ်နေ့မှာသူတို့ရဲ့ aggiornamento ကိုတခြားသူတွေလိုပဲကြေငြာလိုက်တာဟာသမိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Tidiane N'Diaye မှလူမည်းများအားအာရပ် - မွတ်စလင်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှု
SOURCE မှ: http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=11158
€7ကနေ 21,90 အသစ်
3 33,58 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 21,90 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးAprilပြီလ 22, 2021 ရက် 7:48 pm တွင်ရက်စွဲပါ
The Dark Tower (2017) တွင်ကြည့်ရှုပါ
Tao tö king - လမ်းနှင့်သီလစာအုပ် (PDF)
၀ ိညာဉ်ရေးရာ - Deepak Chopra (အသံ)